रामकुमारी झाँक्रीले माधव नेपालको ‘एस’ पार्टी परित्याग गरेकी हुन् ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
रामकुमारी झाँक्रीले माधव नेपालको ‘एस’ पार्टी परित्याग गरेकी हुन् ?
काठमाडौं, २ असोज ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी चर्चित नेतृ राम कुमारी झाक्रीले एकाएक पार्टी छाडेको चर्चा चलेको छ । मीनभवनस्थित भीएस निकेतन स्कुल नजिकै खोलिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी कार्यालयको उद्घाटनमै उपस्थित नभएपछि उनले पार्टी छाडेको गाईगुई चलेको हो ।
मीनभवनस्थित भीएस निकेतन स्कुल नजिकै खोलिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी कार्यालयको बार्दलीमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूले मुठ्ठी उठाएर कार्यकर्तालाई सन्देश दिए( हामी यहाँ छौं ।
त्यसो भए किन उपस्थित भइनन् रामकुमारी झाँक्री ? पार्टी दर्ता भएको २४औँ दिनमा पार्टी कार्यालय उद्घाटनमा उनलाई नदेखेपछि कार्यकर्ताबीच कानेखुसी चल्यो( झाँक्री दिदी किन आइनन् ?
एमालेबाट अलग भएर नेकपा (एस) गठन गरेयता झाँक्री सो पार्टीकी रोलमोडलजस्तै भइन् । गत ९ भदौमा नेकपा (एस) दर्ताका लागि सनाखत गर्न जाँदा तत्कालीन प्रस्तावित अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको हात तानेर निर्वाचन कार्यालयमा प्रवेश गराएकी झाँक्रीले राजनीतिक वृत्तलाई निकै तताइन् ।
कार्यकर्ताले खोजेपछि पत्ता लाग्यो( उनी काठमाडौं बाहिर रहिछन् । नेकपा(एस)निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीका अनुसार झाँक्री पार्टी कामले सल्यान पुगेकी छन् ।
तर, झाँक्री भने सल्यानबाट रूपन्देही पुगेकी छन् । झाँक्रीले आफू पार्टी कामका लागि रूपन्देही रहेको बताइन् । ‘म पार्टी कामका लागि अहिले रूपन्देही भएका कारण पार्टी कार्यालय उद्घाटनमा सहभागी हुन पाइनँ’, झाँक्रीले भनिन् ।